Izimpahla Ezipakishwe Ngamabhodlela Nezimbotshana: Yonke Ulwazi Olungaba Khona - Clickfor.net | Ibhulogi Yezihambeli | Thumela ibhulogi yesivakashi
Ukudla okupakishwe ngamabhodlela kanye namajajethi sekunesikhathi eside kukhona. Izitsha zengilazi zazisetshenziswa eGibhithe lasendulo ngaphambi kwesikhathi sethu. Ubuchwepheshe bokwenza amabhodlela abukaguquki kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Konke lokho kwashintsha ngemuva kuka-1900 lapho kwakhiwa umshini wokuqala wokwenza amabhodlela, ukhahlela ukukhiqizwa kwenqwaba ... Funda kabanzi
Ukudla okupakishwe ngamabhodlela kanye namajajethi sekunesikhathi eside kukhona. Izitsha zengilazi zazisetshenziswa eGibhithe lasendulo ngaphambi kwesikhathi sethu. Ubuchwepheshe bokwenza amabhodlela abukaguquki kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Konke lokho kwashintsha ngemva kuka-1900 lapho kwakhiwa umshini wokuqala wokwenza amabhodlela, kwaqala ukwenziwa kwezinto eziningi ezifakwe emabhodleleni nezifakwe emajarini. Ngaphezu kwalokho, iziqukathi zengilazi zivame ukusetshenziselwa amakhemikhali asekhaya. Izimbiza zengilazi, kanye namabhodlela, manje zincintisana nenhlanganisela yamasaka amakhadibhodi namabhodlela epulasitiki, njengoba isimo sesishintshile. Iziqukathi ezifakwe emabhodleleni, naphezu komncintiswano, zisadingeka kakhulu ebhizinisini lokupakisha. Iminyaka eminingi, ukudla, kanye nabenzi bemikhiqizo yezokwelapha, baye bakhetha izinto ezipakishwe ngamabhodlela nezifakwe emajarini. Yiziphi izici amakhasimende azithola zikhanga?
Ngaphezu kwalokho, emakethe namuhla, kunezinhlobo eziningi ezahlukene zokupakisha ukudla. Nakuba isitayela esisodwa singase sikhethwe ngokusekelwe emkhiqizweni ozopakishwa, wonke anomgomo ofanayo engqondweni: ukuvikela ukudla. Lona umsebenzi oyinhloko wokupakisha, nokho uguqukile ngokuhamba kwesikhathi ukuze uhlanganise neminye imisebenzi eyinzuzo kubo bobabili abakhi kanye namakhasimende. Amathini, izimbiza zengilazi, amabhodlela epulasitiki, nezikhwama zefoil zisetshenziselwa ukupakisha izinto ezihlukahlukene. Isitayela ngasinye sokupakishwa kokudla sinesethi yaso yezinzuzo kanye nezithiyo mayelana nempilo, ukunethezeka ekhaya noma ekuhambeni, nokugaywa kabusha noma ukulahlwa. Asikho isidingo sokuzilungisela ama-doughnuts, ophaya, okukhukhamba, noma ojamu lapho ukudla okuphekiwe kutholakala emabhodleleni nasezitsheni. Imikhiqizo epakishiwe, njengezinye izinto ezilula, inesabelo sayo sobubi obufihliwe. Ngenhlanhla, ngolwazi oluncane kanye nokuqwashisa, unganquma ukuthi yiziphi izinto ezipakishiwe ezifanele futhi ezimele ubungozi obubalulekile bezempilo.
Izimpahla ezisemabhodleleni yimikhiqizo ethengiswa ngamabhodlela epulasitiki noma ezitsheni zengilazi. Iziqukathi ezinjengezitsha zengilazi, amathini, izitsha zepulasitiki, namabhokisi zisetshenziselwa ukwenza nokudayisa izimpahla ezipakishiwe. Ayatholakala futhi emakhathoni nasezikhwameni. Ukudla okusha okufana nenyama, imifino, inhlanzi nezimbaza kukhona phakathi kwakho. Izimpahla okungezona ezokudla njenge-shampoo, umuthi wokuxubha, izinto zokuhlanza, izinto zasengadini, nokudla kwezilwane ezifuywayo ziyizibonelo.
Amakhasimende amaningi amatasa afuna enye indlela ngaphandle kwamanzi kampompi, okungase kuhlanganise amakhemikhali anezelwe noma amagciwane, aphendukele emanzini asemabhodleleni. Izimpahla eziningi ezipakishiwe zitholakala ezitsheni zengilazi, zinikeza inketho enempilo kumathini kulabo abakhathazekile ngempilo yabo. Izimbiza zengilazi zingaphinda zisetshenziswe noma zigaywe kabusha, futhi azinawo amakhemikhali ayingozi angase angcolise ukudla.
Iningi lokudla okupakishiwe kuphephile ukudliwa. Ezinye, nokho, zidinga ukuphathwa nokugcinwa okukhethekile ukuze zigweme ukutheleleka ngebhaktheriya. Izithelo ezipakishiwe kufanele zidliwe ngokushesha ngangokunokwenzeka ukugwema ukubola. Okunye ukudla okupakishiwe kufanele kushiswe kabusha ngaphambi kokuthi kudliwe. Uma kuziwa ekuthengeni imikhiqizo epakishiwe, isitolo segrosa sibonakala sinikeza inhlobonhlobo yamathuba. Ngakolunye uhlangothi, izimpahla ezigayiwe zivame ukushibhile futhi zisebenziseka kalula, futhi impilo yazo yeshalofu ende isebenza njengenzuzo. Izimpahla ze-boutique ezibizayo ezinezithako ezitholakala endaweni kanye nezilondolozi zemvelo zikolunye uhlangothi lwe-spectrum. Izimpahla eziwela endaweni ethile phakathi nendawo zinikeza ukunethezeka ngaphandle kokulahlekelwa ukunambitheka. Sikhiqize uhlu lwezizathu eziphezulu zokuthi kungani izinto ezifakwe emabhodleleni, kanye nezinto ezifakwe emabhodleleni, zinenzuzo kumakhasimende ukusiza ukuletha lezi zinzuzo obala.
Izinzuzo Zezimpahla Ezipakishwe Ngamabhodlela Namajarred
Lezi zimpahla zingadliwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Alula futhi ukuwahambisa kanjalo nokugcina. Akudingeki ukuthi zipakishwe noma zigcinwe ezitsheni zokugcina impahla. Ukudla okupakishiwe kunekhwalithi ephezulu njengoba kuvikelwe emvelweni kanye nasekulimaleni ngokomzimba ngesikhathi sokuphatha ukudla. Iziqukathi zengilazi zokwandisa impilo esebenzisekayo yezimpahla zabo. I-convenience quotient ingeyokugcina kodwa okungenani. Ziyasisiza futhi ukuthi songe umzamo kanye nesikhathi, uma kuziwa ekuthengeni, ekulungiseleleni nasekuphekeni.
Enye yezinzuzo ezinhle kakhulu zezimpahla ezifakwe emabhodleleni, kanye nezimpahla ezipakishwe emajarini, ukuthi ngokupakisha lezi zimpahla ngalezi zinhlobo zokupakishwa, abantu bangandisa impilo yezimpahla ezithile ezingakhuphula isikhathi ezingahlala. Ipulasitiki, isibonelo, inenzuzo ethile nokuthi ingakusiza ukuguqula umoya, okusiza ukugwema ukuguquguquka nokwelula impilo yento. Le ndlela isetshenziswa amabhizinisi amaningi njengoba igcina izimpahla zizintsha isikhathi eside ezitsheni zensimbi.
Izinsiza zokupakisha ukudla ekuthuthweni okuphephile nasekugcinweni kwezinhlobonhlobo zokudla neziphuzo. Ngesikhathi sokuphatha, ukupakisha kwehlisa ukuchayeka ezintweni ezingcolisa umoya kanye namagciwane, okungadala izifo, njengoshevu wokudla. Nokho, ukusebenzisa izinto ezigaywe kabusha ukuze kuhlanganiswe ukudla kuphakamisa ubunzima. Ama-ejensi alawulayo anezidingo eziqinile ezikhona zokuqinisekisa ukuthi amafemu asebenzisa izinto ezigaywe kabusha ahlanzekile futhi aphephile. Ukupakisha nakho kwenza kube lula ukugcina ukudla kuhlanzekile ekhaya ngoba akudingekile ukushiya obala.
Ukungalungi Kwezimpahla Ezipakishwe Ngamabhodlela Nezijeke
Ake sibheke ukonakala uma sesixoxe ngobuhle. Ukupakishwa kokudla kukhiqiza udoti omningi. Bekulokhu kungumthombo wenqwaba kadoti. Ngokuvamile, ukudla okupakishiwe kungase kubize kakhulu futhi kubize kakhulu uma kuqhathaniswa nokudla okungapakishwanga, njengoba amabhizinisi kufanele akhokhe imali eningi yokupakisha izimpahla zawo, izindleko ziyanda, ngakho-ke lezi zimpahla ziyabiza. Okunye okunomthelela omubi kakhulu wumthelela wokudla okupakishiwe empilweni yomuntu ocishe ube mubi. Izithasiselo zokudla nezinambitheka zokwenziwa, ezitholakala kakhulu kulezi zinhlobo zezimpahla, zingaba yingozi futhi/noma zibe yingozi ekumukeni komuntu, kanye nokunciphisa noma kube kubi ukunambitheka.
Enye yezinto ezimbi ezibaluleke kakhulu zokusebenzisa lezi zimpahla zokupakisha ukuthi kwandisa izindleko eziyisisekelo. Uma amabhizinisi noma abantu besebenzisa lezi zinhlobo zokupakisha, kwandisa izindleko zempahla yabo cishe ngamaphesenti angama-20 kuye kwangama-50, kuye ngamaphakethe abawasebenzisayo. Kuphinde kuncike kubathengi ukuthi bayathanda ukudla noma cha. Ukupakisha nje ukuheha amakhasimende, uma ukudla kungekuhle ke, umthengi ngeke abone ukuthi ukupakishwa bekumnandi. Ingilazi yokukhipha impahla ikhulu kakhulu. Uma kuqhathaniswa nempahla ekupakishweni okuvamile, lokhu kwenza ukuthulula nokulayisha ngokomzimba izinto ezitsheni zengilazi kube nzima kakhulu. Iziqukathi zengilazi ziwuhlobo oluthambile lokupakisha. Izindleko zemikhiqizo epakishwe emabhodleleni ziphezulu. Abakhiqizi bavamise ukumisa izindinganiso zekhwalithi zezinhlobo ezithile zokupakishwa kwamabhodlela. Kubalulekile ukunciphisa izinga lokuphuka kanye nezimpahla ezingekho ezingeni ekwenziweni kwemikhiqizo, kanye nezimfanelo ezisezingeni eliphezulu zeziqukathi zengilazi. Izidingo ezikhulayo ziphakamisa izindleko, eziphakamisa intengo yomkhiqizo oqediwe.
Ukupakishwa kwabathengi, ngokusho kwezifundiswa zaseDuke University uPatrick Reaves kanye noMichael Nolan, kubala udoti omningi wepulasitiki namaphepha, okubalelwa ku-20% wazo zonke izindawo zokulahla imfucumfucu. Ukususwa kwamaphakheji okudla kubuyisela udoti ohlelweni lwendalo, oluba nemiphumela emibi kakhulu. Udoti omningi unobuthi. Ipulasitiki, isibonelo, iqukethe izinto ezibangela umdlavuza namakhemikhali alimaza isimiso sokuzala. Ngaphezu kwalokho, izinto eziningi ezipakishwayo aziboli, okubeka engcupheni ukuphila kwabantu nezilwane, ikakhulukazi izilwane zasolwandle.
mangaki amabhodlela amanzi ayigalani
Amabhodlela ayi-8 we-16 oz ziyadingeka ukwenza ilitha elilodwa.
indlela yokuvula ibhodlela ngaphandle kokuvula ibhodlela.
Ungakwazi ukukhipha phezulu ebhodleleni likabhiya ngokusebenzisa okokukhanyisa noma isibambo sesipuni, noma usebenzise elinye ibhodlela likabhiya.
ungaqala kanjani ibhizinisi lamanzi asemabhodleleni
Ingabe ufuna ukwazi kwezobuchwepheshe kanjani noma inqubo entite yokusetha ibhodlela.
Noma kunjalo, incike kuliphi izwe kanye nemithetho nemithetho yabo.
kubiza malini ukuqala inkampani yamanzi asemabhodleleni
Lo ngumbuzo ongenangqondo, ngoba uncike ohlotsheni lwebhizinisi ofuna ukuliqala. Ibhizinisi lomuntu oyedwa elidayisela abashayeli amanzi amponjwana lingase liqalwe lingenayo imali nhlobo, kucatshangwa ukuthi ungathola i-bodega ezimisele ukukunikeza isikweletu sika-$50 amahora ambalwa.
enziwa kanjani amanzi asebhodleleni
Amanzi avele aphonswe emthonjeni, ahlungwe futhi afakwe ebhodleleni njengesoda ye-pop, isistimu yamabhodlela evamile.
Abanye bangase banqume ukwengeza i-CO2 ukuze bathole amabhamuza.
Amanye amanzi empeleni angamanzi edolobha afakwe ebhodleleni ngakho afana nesoda ngaphandle kwezithasiselo. Empeleni kungenziwa kulayini wamabhodlela ofanayo.
izimpahla ezipakishwe emabhodleleni nezifakwe emabhodleleni
Izinzuzo nokusekelwa kwesitifiketi se-COBID